TOP 10 món ăn sáng cho bé 1 tuổi mẹ làm siêu nhanh | Muasalebang - Muasalebang
TOP 10 món ăn sáng cho bé 1 tuổi mẹ làm siêu nhanh | Muasalebang
Đang Đọc: TOP 10 món ăn sáng cho bé 1 tuổi mẹ làm siêu nhanh | Muasalebang in Muasalebang
Ingane enonyaka ongu-1 yisikhathi lapho idinga ukumunca izakhi eziningi ezidingekayo ukuze isize ukukhula kwayo. Isihloko esilandelayo sizokwethula izidlo zasekuseni eziyi-10 eziphezulu zezingane ezinonyaka owodwa ezinziwa omama ngokushesha okukhulu.
1 1. Ibhulakufesi lezingane namakhekhe
1.1 1.1. Amathiphu okulungiselela ama-pancake ngokushesha
1.2 1.2. Okunye ukudla okuhlanganiswe ukwenza amakhekhe
1.3 1.3. Iziphuzo ezingahlanganiswa nama-pancake
2 2. Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinamaqebelengwane anempilo
2.1 2.1. Ikhukhi
2.2 2.2. Ikhekhe le-Custard
2.3 2.3. Amadombolo
2.4 2.4. Ama-egg tarts
3 3. Ibhulakufesi lezingane nesinkwa nojamu, ibhotela lamantongomane
4 4. Ibhulakufesi lezingane nesinkwa namaqanda
5 5. Ibhulakufesi lomntwana nesinkwa nenyama
6 6. Ibhulakufesi lezingane nephalishi
7 7. Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinezitsha zenoodle
8 8. Ibhulakufesi lezingane ezinama-noodle noma pho
9 9. Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinemifino exutshwe, amaqanda nenyama
1. Ibhulakufesi lezingane namakhekhe
Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinama-pancake ngokuqinisekile akuyona into engaziwa komama abaningi. I-Pancake ikhekhe elilula ukulenza, kulula ukuhlanganisa ama-flavour nezithako ezihlukahlukene, futhi kulula ukunqoba izingane. Ngoba kuye ngokuthandwa yingane yakho, ungakhetha ngokuphelele izithako zakho ozithandayo ukuze uzihlanganise. Ukukusiza ucebise ukudla kwakho kwasekuseni ngama-pancake, nanka amathiphu amahle nezithako ezijwayelekile, ezinomsoco ongazilungiselela ukuze unikeze izingane zakho ukudla kwasekuseni okumnandi, okujabulisayo, nokunomsoco. Asibonisane ndawonye.
1.1. Amathiphu okulungiselela ama-pancake ngokushesha
Umama angakwazi ukwenza i-pancake batter kusukela ngobusuku bangaphambilini, ayigcine efrijini futhi avele ayithele ekuseni.
Ungasebenzisa ufulawa we-pancake oxutshwe ngaphambilini otholakala ezitolo ezinkulu uma umatasa futhi ungenaso isikhathi sokwenza owakho.
Umqondo kamama ufuna ukuvumela izingane zakhe ukuthi zijabulele amakhekhe afanayo, angalungisa izithako ezizosetshenziswa kusihlwa, ukuzigcina zipholile esiqandisini.
Thatha ithuba lokudla okufana nezithelo nemifino etholakala endlini ukuze uhlanganise kalula namakhekhe.
Ukuba noju kanye nojamu okulungile yizithako ezimbili ezidume kakhulu ezingasetshenziswa nama-pancake noma isinkwa ngesikhathi sasekuseni, okuyinto elula kakhulu. Umama uphinde waphawula ngokusetshenziswa koju. Izingane ezineminyaka engaphezu kuka-1 ubudala zingasebenzisa uju kodwa ezingaphansi konyaka owodwa ubudala azikwazi. Ngoba kuju, kunamabhaktheriya angenabungozi kubantu abadala noma ezinganeni ezindala, kodwa ayingozi ezinganeni ezingaphansi konyaka owodwa ngenxa yesimiso sabo sokugaya ukudla esingavuthiwe.
1.2. Okunye ukudla okuhlanganiswe ukwenza amakhekhe
Uma ingane yakho ithanda ukunambitheka okunosawoti : Umama angalungisa izithako ezifanelekayo njengamaqanda (zokuthosa), inyama yenkomo egayiwe (ethosiwe), ingulube egayiwe (yokwenza ishumai noma ukuthosa), ushizi…ukuze umntwana asebenzise amapanikuku . Ungakwazi futhi ukulungisa ngokushesha isaladi likaviniga elilula noma isaladi likakotapheya ukuze ingane yakho idle ndawonye ukuze zithole imicu eyengeziwe futhi ivuse imiqumbe yokunambitha.
Uma ingane yakho ithanda ukunambitheka okumnandi : uju noma ujamu kuyisinqumo sokuqala esilula ukunqoba izingane. Ngaphezu kwalokho, umama angakwazi futhi ukulungisa ibhotela lamantongomane, ibhotela elingenasawoti elifafazwe ngoshukela omncane onsundu noma i-caramel, ubisi olujikisiwe, iyogathi; izithelo ezintsha ezifana nobhanana, ama-apula, amapheya, … ukuze izingane zisebenzise.
1.3. Iziphuzo ezingahlanganiswa nama-pancake
Ijusi yezithelo kulula futhi iyashesha ukwenza, ungalungiselela ingane yakho ukudla kwasekuseni nama-pancake afana nejusi lewolintshi, i-honey lemonade, i-kumquat, ijusi yesithelo se-passion, njll. Ungakwazi ukwengeza imbewu ye-chia ukuze uhlanganise ndawonye ukuze kube lula. Qiniseka ukuthi ingane yakho ithola i-fiber eyanele.
Ungakwazi yini ukunikeza ingane yakho iyogathi eyengeziwe ukuze iphuze?
Ama-Smoothies nawo ayisinqumo esifanele uma ehlanganiswa nesidlo sasekuseni se-pancake. Mayelana nama-smoothies umama angawalungiselela ngokushesha njenge-avocado smoothie, i-strawberry smoothie, i-mango smoothie, ubhanana + othosiwe we-peanut smoothie, i-sapoche smoothie,…
2. Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinamaqebelengwane anempilo
Impela omama abaningi abakuthandi ngempela ukudla kwasekuseni okulungiselelwe ngale ndlela. Eqinisweni, nakuba kulula, ukuhlanganisa amaqebelengwane anempilo nokunye ukudla okuphekwe ngokushesha neziphuzo kunganikeza umntanakho ukudla kwasekuseni okunomsoco akudingayo.
Amabhisikidi afana namabhisikidi obisi, ama-whole-grain barley crackers ayiqembu lamakhukhi anempilo omama abangawasebenzisa ukuze balungiselele izingane zabo ukudla kwasekuseni. Ukukhetha ikhekhe elinempilo, kufanele unake izithako ezisephakeji, ugweme ukukhetha uhlobo olunoshukela omningi kanye nezithasiselo eziningi zokudala i-foam noma i-crunch.
Isidlo sasekuseni somntwana esinamabhisikidi sizoba nempilo lapho umama elungisa ubisi noma ushizi nesithelo esincane noma i-smoothie noma ijusi.
2.2. Ikhekhe le-Custard
Baningi omama abakwazi ukubhakela izingane zabo amakhekhe ukuze ziwadle njalo. Ngakho-ke omama nabo basebenzisa izindlela zokupheka indlela yokwenza amaqebelengwane esipontshi ekhaya ukuze balungiselele ingane yakho isidlo sasekuseni. Amapancake anezindlela eziningi zokwenza nokunambitha futhi. Omama bangalungisa amaqebelengwane esipontshi amnandi noma amnandi, ngezithelo ezomisiwe noma imifino ukuze bashintshe ukunambitheka kwengane kahle kakhulu. Uma ungenaso isikhathi sokukwenza, ungaphinde ukuthenge emabhikawozi ahloniphekile ukuze ube namakhekhe amnandi nanempilo engane yakho.
Ukuze bangabi nesithukuthezi ngokudla okwanele kwasekuseni, kanye namakhukhini, omama bangalungiselela ubisi olwengeziwe, iyogathi, ubisi lwesoya, ama-smoothie, nezithelo ukuze izingane zabo zizisebenzise.
Amadombolo ajwayelekile kumenyu yethu yasekuseni yase-Vietnamese. Omama bangaphinde bakhethe lolu hlobo lwekhekhe ukushintsha ukudla kwasekuseni kwengane yabo. Ukuze kube lula, ungayilungisa ngobusuku bangaphambili bese uyishisa futhi ekuseni ukuze ingane yakho iyisebenzise.
Njengamanje, iresiphi yokwenza amadombolo nayo icebile kakhulu, iningi lalabo abakhuthele ekhishini bangakwenza. Ngaphezu kwalokho, impushana yedombolo exutshwe ngaphambili iyatholakala nasezitolo ezinkulu nasezimakethe, umama angakwazi ukuyithenga kalula ngokuya ngeresiphi ongayenza. Ukugcwaliswa kucebile ngokulinganayo, kuye ngokuthanda kwakho, ungenza inyama egayiwe elula kanye nokugcwalisa u-anyanisi noma ukugcwaliswa okumnandi njengobhontshisi obuluhlaza, ubhontshisi obomvu obomvu ukuze ujabulise ingane yakho.
Uma ungeke ukwazi ukukulungisa, ungathenga amadombolo enziwe ngomumo ezinkampanini ezimbalwa ezinedumela elihle ukuze ulungiselele ingane yakho ukudla kwasekuseni, nakho okushesha kakhulu futhi okulula.
Ukuze uthole ukudla kwasekuseni okunomsoco namadombolo, omama kufanele bahlanganise ubisi, ubisi lwesoya, iyogathi nezithelo ukuze umntwana asebenzise.
2.4. Ama-egg tarts
Amaqebelengwane amaqanda nawo angomunye wamaqebelengwane alula ukunqoba izingane. Akunzima ukwenza ama-egg tarts. Omama bangayilungisa kusukela ngayizolo ukuyigcina ibanda, ngakusasa ekuseni ingathathwa ukuze isetshenziswe umntwana. Ukuze kube lula, ungathenga amakhekhe enziwe ngomumo emabhikawozi ukuze unciphise isikhathi sokubhaka.
Ama-egg tarts anamafutha kanye nobumnandi, ngakho-ke sicela uwahlanganise esidlweni sasekuseni somntwana wakho ukuze azalwe kahle noma izithelo ezosetshenziswa ingane yakho ukulinganisela kokubili ukunambitheka nokudla.
3. Ibhulakufesi lezingane nesinkwa nojamu, ibhotela lamantongomane
Isinkwa nojamu kulungiswe ngokushesha okukhulu. Lesi futhi isidlo sasekuseni esithandwa kakhulu ezinganeni, ikakhulukazi labo abathanda uswidi nojamu.
Isinkwa esisetshenziswa ngejamu kufanele sisebenzise isinkwa sokusanhlamvu, isinkwa se-oat sizoba ngcono kunokusebenzisa isinkwa esimhlophe.
Ojamu obumnandi ongayilungiselela ingane yakho njengojamu omanzi we-marmalade, ujamu wama-strawberry, ujamu wecherry, ujamu wekiwi, njll. Le jamu yonke ingenziwa ngumama uma enesikhathi, kodwa uma engenaso, angathengwa noma yisiphi isitolo esikhulu.
Ngaphandle kukajamu, omama bangakwazi futhi ukulungisa isinkwa ngebhotela lamantongomane noma ibhotela elingafakwanga usawoti noma ushizi ofafazwe ngezinhlamvu ezimbalwa zikashukela onsundu, nakho okuvusa ukunambitheka komntwana kahle kakhulu.
Lungiselela ukudla kwasekuseni okunempilo ngesinkwa sikajamu, khetha ukwengeza ama-smoothies noma amajusi omuncu ukuze ulinganise ukunambitheka futhi wengeze uvithamini C wezingane zakho.
4. Ibhulakufesi lezingane nesinkwa namaqanda
Isinkwa namaqanda ukudla kwasekuseni kwendabuko, kungasetshenziswa ukulwa nemililo uma singekho isikhathi sokulungiselela izingane izitsha zasekuseni eziyinkimbinkimbi. Ukuze umntwana wakho asebenzise okumnandi futhi okunempilo, kufanele futhi ukhethe isinkwa se-oat, okusanhlamvu, i-rye, namantongomane noma imidumba.
Amaqanda azosetshenziswa nesinkwa kungaba amaqanda athosiwe, ama-omelets alula noma amaqanda aphekiwe noma amaqanda aphekiwe.
Omama kufanele balungiselele izingane ezinama-smoothies noma ama-juice, izithelo ezintsha zokudla kwasekuseni ngesinkwa, amaqanda.
5. Ibhulakufesi lomntwana nesinkwa nenyama
Ukuze uthole isinkwa esinenyama kamama, ungasebenzisa isinkwa esenziwe ngama-oats, ukolweni ophelele noma i-rye.
Inyama esetshenziselwa isinkwa ekhaya ukuze kube lula futhi kusheshe kodwa kusenomsoco futhi kumnandi, kunezindlela eziningi zokuzilungiselela. Umama angenza inyama egayiwe ngobusuku bangayizolo, noma ingulube shumai ngokwesibonelo. Lezi yizitsha ezi-2 ezilula kakhulu zokudla inyama, zingalungiswa kusenesikhathi futhi zidinga nje ukushisisa ekuseni. Noma ungenza futhi inyama yenkomo egayiwe enongiwe exutshwe nesitashi sombila noma ufulawa, iyindilinga futhi ithosiwe ukuze ithoswe, yenze ucezu lwenyama olumnandi okulula ukulwenza ngesinkwa. Ungakwazi ukwengeza i-ketchup encane nemayonnaise ukuze uvuse imiqumbe yokunambitha yengane yakho.
Ukuze adle nesinkwa senyama, umama ulungiselela ikhukhamba elincane kanye notamatisi osikiwe ukuze abeke phezu kwesinkwa sezingane, okumnandi ngokwanele.
6. Ibhulakufesi lezingane nephalishi
Uma kukhulunywa ngophuthu omama bazoba namahloni ngoba kuthatha isikhathi ukupheka. Kodwa-ke, uma sineqhinga elincane, kukhona ngokuphelele iphalishi elishisayo, elimnandi ukuze izingane zidle ukudla kwasekuseni ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ukuze uthole amathiphu amahle, ungabheka okulandelayo:
Umama upheke iphalishi elimhlophe ngayizolo, waliyeka lipholile waligcina efrijini.
Ezinye izithako zokupheka i-porridge njengezinhlanzi, inkukhu, ingulube, njll, zilungiselelwe ngokwehlukana noma ziphekwe ekupheleleni (kuye ngokuthi uhlobo), zigcinwe esiqandisini.
Ekuseni, umama udinga nje ukupheka i-porridge futhi abeke izithako ezilungiselelwe kusengaphambili ukupheka, i-seasoning ukuze ivumelane nokunambitheka kwengane.
7. Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinezitsha zenoodle
Noma iyiphi ingane iyawathanda ama-noodle, ngakho-ke uma isidlo sasekuseni somntwana kamama singenawo ama-noodle, kuyoba iphutha elikhulu. Ama-noodle amnandi ezingane angaphekwa njengama-noodle ezilwane zasolwandle, inyama yenkomo, amakhowe, noma izitsha ezithosiwe. Futhi-ke, ezitsheni ze-noodle, ungakhohlwa ukwengeza imifino ukuze uqinisekise i-fiber eyanele namavithamini adingekayo kumntwana.
Ngakho-ke, indlela yokulungisa isidlo sasekuseni ngama-noodle ukuze ingane yakho idle kahle ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi ilungiselela, nanka amathiphu amahle ongawasebenzisa.
Umama ukhetha ama-noodle amahle ezinganeni ezinjengo-Udon, ispaghetti singcono ezinganeni. Uma ukhetha ama-noodle asheshayo, kufanele ubilise amanzi ngaphambi kokuwalungiselela ingane yakho.
Umama ulungiselela izithako zokupheka noma ukuzithosa ngama-noodle kusengaphambili njengenyama yenkomo, izimfanzi ezintsha, izibopho zezinhlanzi nemifino. Lungiselela lezi zithako ngokwehlukana futhi ugcine esiqandisini.
Lungiselela umhluzi kusengaphambili uma ufuna ukulungiselela ingane yakho isobho le-noodle. Kanye nokulungiselela isoso kusengaphambili uma kuyisitsha senoodle esixutshwe nesoso.
Lapho izithako sezilungisiwe, kuthatha imizuzu embalwa nje ukuthi umama abe nama-noodle amnandi, ashisayo ukuze umntanakhe awasebenzise.
8. Ibhulakufesi lezingane ezinama-noodle noma pho
Uma kuyi-vermicelli, umama angakwazi ukwenza i-vermicelli elula ehluma yengane noma i-vermicelli ephekwe ngezimbambo ezincane. Endabeni ye-pho, ungakwazi ukupheka inyama yenkomo pho noma isobho lenoodle yenkukhu. Lawa ma-flavour wonke kulula kakhulu ukuwanqoba. Omama bangakwazi nokwenza ama-noodle athosiwe emifino noma isobho lenkomo yenkomo ethosiwe ukuze bashintshe ukunambitheka kwengane.
Amathiphu okwenza lezi zitsha ezisheshayo kanye nalezi ezingenhla:
Umama angasebenzisa ama-noodle omile, ekuseni nje udinga ukubilisa amanzi ashisayo ukuze abe ne-vermicelli. Futhi-ke pho futhi, kunezinhlobo eziningi ze-pho ezomile ezipheka okumnandi futhi okusheshayo kuye ngohlobo oluhloniphekile umndeni okhetha ukulusebenzisa.
Umhluzi kamama nawo ungalungiswa ngobusuku bangaphambi kwalokho, uvumele upholile futhi uwugcine esiqandisini ngendlela efanele.
Umama angakwazi ukwenza ama-pellets kusenesikhathi ukuze ekuseni avele awafake ukuze apheke. Ungakwazi nokuwupheka kuqala uma ungenaso isikhathi sokuwupheka ekuseni.
Uma usebenzisa inyama yenkomo, sicela usike kancane inyama yenkomo bese uyigcina ibanda ukuze ikwazi ukupheka ngokushesha ngakusasa ekuseni.
Uma kuyinkukhu, ungayilungisa noma uyilungise kuqala ukuze uyigcine ihlukene.
Uhlobo ngalunye lwemifino umama ayisebenzisayo luncike ekuvuthweni noma ekuphekeni, alulungiselela ngokufanele, ahlukanise uhlobo ngalunye futhi alubeke esiqandisini ukuze lulungiswe ngokushesha ekuseni.
9. Ukudla kwasekuseni kwezingane ezinemifino exutshwe, amaqanda nenyama
Lesi ngesinye sezitsha okulula ukuzihlanganisa, ukuzilungiselela kalula futhi okunomsoco. Ungenza isidlo semifino esixutshwe, wengeze iqanda elithosiwe kanye nenyama eyosiwe / inyama eyosiwe.
Mayelana nemifino : Ungakhetha amazambane abilisiwe noma abhakwe ngaphambilini/ubhatata. Eminye imifino engaxutshwa ndawonye imnandi kakhulu njengobhontshisi, uphizi, izaqathi. Izinhlobo ezibila ngokushesha, umama angazilungiselela kuqala futhi azibilise ekuseni. I-Diced yonke futhi ixubene ne-sauce kuye ngokuthi ukunambitheka kwengane, mhlawumbe imayonnaise noma isoso omuncu, isibonelo.
Mayelana nendlela yokwenza inyama : Umama angakhetha inyama yengulube engenamafutha noma ingulube yengulube noma inyama yenkomo, egaywe ngezinongo. Uma kuyingulube, ungayithosa ukuze uyipheke kuqala, uyiyeke iphole bese uyigcina esiqandisini. Noma ungayisika kancane inyama, uyihambise ngezinongo futhi uyithose ngokujulile. Ngenyama yenkomo, ngi-marinate isinongo ukuze sisheshe senze ekuseni ngoba inyama yenkomo isheshe iphekwe.
Ekuseni, umama angaphinde afudumale uma inyama isiphekwe, noma ukupheka inyama e-marinated, uthathe izingcezu ezincane ukuze umntwana asebenzise imifino exutshwe.
Ilayisi elithosiwe liphinde libe isidlo sasekuseni esijwayelekile semindeni eminingi. Omama bangakwazi futhi ukudala izindlela zokupheka eziningi, ezicebile ngokunambitheka ukuze izingane zabo zibe nezitsha ezimnandi nezinomsoco zokudla kwasekuseni. Irayisi ethosiwe ukuze izingane zilungiswe ngokushesha ekuseni irayisi elithosiwe ngeqanda, irayisi ethosiwe yenkomo egayiwe kanye nelayisi elithosiwe yizimfanzi.
Ngerayisi ethosiwe ngeqanda, kufanele wengeze imifino nezinongo ezimbalwa ukwenza isidlo sibe mnandi futhi sibe nomsoco njengo-anyanisi, utamatisi, izaqathe, uphizi, ukholifulawa ..
Ngenyama yenkomo ethosiwe irayisi, ngaphezu kwezaqathe, u-anyanisi, ubhontshisi obuluhlaza, ukholifulawa, ungasebenzisa futhi uphizi nekhukhamba.
Ngelayisi elithosiwe le-shrimp, ungahlanganisa ukhukhamba amaningi, izaqathe, u-anyanisi, …
Ngenhla yizidlo ezingu-10 eziphezulu zomama abanonyaka owodwa ukuze bapheke ngokushesha okukhulu. Ngethemba ukuthi ngemva kokufunda isihloko ungasisebenzisa futhi uphumelele!
TOP 40 Phim Kiếm Hiệp Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại | Muasalebang
Galaxy Note 10 Lite Cũ – Đang Khuyến Mãi Nhiều Ưu Đãi | Muasalebang